हामी बाहिर निस्कन आवश्यक छः रिता झा - Enavanari
हामी बाहिर निस्कन आवश्यक छः रिता झा
रीता झा, उपमेयर,जनकपुर उपमहानगरपालिका
पिता राधाकान्त मिश्र र माता इन्दिरा मिश्रको कोखबाट वि.सं. २०२५ साल असोज २३ गते सुर्खेतमा जन्मिएकी रिताले एसएलसीसम्मको शिक्षा हासिल गरेकी छिन् । धीरेन्द्र झासँग वैवाहिक जीवनमा गाँसिएकी रिता परिवारका दुइ छोरा र एक छोरी छन् । २०६२ र २०६३ को आन्दोलनबाट राजनीतिमा हामफालेकी रिता यही निर्वाचन (२०७४) मा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालकातर्फबाट १७ हजार १ सय ४७ मतसहित जनकपुर उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा विजयी भएकी हुन् ।
उपमेयरमा बिजयी हुन्छु लागेको थियो ?
विजय हुनेमा विश्वस्त थिए तर यति धेरै मतका साथ विजयी हुन्छु भन्ने चाहिँ लागेको थिएन । राजपाका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म तन, मन धनले लागेपछि विजयी नहुने त कुरै भएन ।
बिजयी भएपछि सुरुमा के गर्नुभयो ?
सपथग्रहण गर्नुभन्दा अघि हामीले जानकी मन्दीर दर्शन गरेर अर्थात् त्यहाँ पूजापाठ गरेर काम सुरु गरेका थियौं । त्यसपछि घरबाट झाडु, कुचो, डस्बिन बोकी जनकपुरको मुहार फेर्ने काममा लाग्यौं ।
जनकपुरलाई ग्रीन हिल (हरियो जनकपुर), स्वास्थ जनकपुर, स्वच्छ जनकपुर बनाउने योजनासाथ हामी अघि बढेका छौं । जानकी मन्दीरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पहल गर्नेछांै । नाला र सडकको अवस्था बेहाल छ, त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ पनि कार्य गर्ने छांै ।
महिला अधिकारका लागि के कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ?
पिछडिएका जनकपुरका महिलामाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा कसरी पहुँच बढाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ जोड दिनेछांै । अहिले पनि विरामी हुँदा महिलाहरु स्वास्थ्य केन्द्रमा जाँदैनन्, कसरी महिलाको समस्या समाधान हुन्छ, त्यसतर्फ जोड दिनेछांै । महिलाहरुलाई सचेत बनाउनको लागि प्रयास गर्नेछौ । महिला हिंसालगायतका बिषयमा पनि ध्यान दिने छांै । महिलामैत्री जनकपुर बनाउन पहल गर्ने छौं ।
नवनारी म्यागेजिन पढ्ने महिलाहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
सवै महिला दिदीबहिनी अब घरबाट निस्कनुपर्छ । अब हाम्रो अधिकार लिने समय भएको छ । अधिकार दिए पनि पाइरहेका छैनौं, कागजमा नै थन्किएको छ अधिकार । आफ्नो अधिकार लिन सम्बन्धित ठाउँसम्म आफैं पुग्नुपर्छ, अरु कोही पनि दिन आउँदैन । यो सबको लागि आफु सक्षम हुनुपर्छ । अर्को कुरा, नवनारी म्यागेजिनसँग एकदमै खुशी छ । कमसेकम महिलालाई जागृत गराउने काममा अघि बढेको छ । यति टाढाबाट आएर मेरा केही विचारहरु राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि नवनारीका सम्पूर्ण परिवारलाई हृदयदेखिको धन्यवाद ।
प्रस्तुति ःजीवन राज दाहाल